Lahatsary Goofy ‘Mandeha Miantsena Isan’andro’, Manao Fanehoankevitra Henjana Momba Ny Fiainana Sôsialy Ao Hong Kong · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Febroary 2015 10:34 GMT
Mino i Ah Wah fa manampy ireo olona hahatakatra bebe kokoa ny fiaraha-monina ny hanihany. Sary avy tamin'ny inmediahk.net. fampiasàna nahazoana alalana.
Hira ary Rakikira narafitra avy amin'ilay hira malaza navoakan'i Andy Law tamin'ny taona 1990 ny “Gau Wu Every Day” na “Mandeha Miantsena Isan'andro”. Ilay tononkira vaovao dia nosoratan'ireo mpiserasera amin'ny aterineto ao amin'ny “Hong Kong Golden Forum (Fiseraseràna Hong Kong Volamena)”, sehatra fiseraseràna malaza amin'ny aterineto, mba ho hira fanevan'ny “Revôlisiônan'ny Fiantsenàna” izay natao taorian'ilay fanadiovana ilay hetsika fitorevahan'ny mpomba ny demaokrasia tao Mong Kok. Nitaky ny hisian'ny fifidianana demaokratika marina izay ho mpitarika faratampon'ny tanàna ny Hetsika Bodoy ny Afovoany, izay natao teo anelanelan'ny Septambra sy Desambra 2014.
Nataon'ilay ekipa mpamokatra hira Mocking Jer sy ilay mpisera amin'ny aterineto Ah Wah ho rakikira taty aoriana ilay hira nasiana fanamboarana, ary navoaka tamin'ny YouTube. Lasa nalaza be ny alin'iny ilay rakitsary, izay nisy nijery in-670.000 hatreto. Ilay fiverenana manintona miavaka hoe “Mandeha mijanga irery, tsy raharahako ny fanaraha-mason'[ny sipanao]” dia naverina nadika ho “Gau wu (mandeha miantsena) isan'andro, tsy raharahako ny fanarahamason'ny [mpitandro ny filaminanao]” tao amin'ilay endriny vaovao, ary nivoaka tamin'ireo sehatra media sosialy rehetra mahazatra.
Nitafatafa tamin'i Mocking Jer sy Ah Wah ilay mpitatitra vaovao Yeung Zikang ao amin'ny sehatra median'olon-tsotra “inmediahk.net”. Nalefa voalohany tamin'ny teny Shinoa ilay lahatsoratra, ny 26 Janoary, ary nadikan'i Cheung Choi Wan ho amin'ny teny Anglisy. Noho ny fifanarahana ifampizaràna votoaty dia navoaka ato amin'ny Global Voices ilay lahatsoratra amin'ny teny Anglisy.
Niakatra be ny lazan'i Ah Wah taorian'ny nisehoany tao amin'ny “Mandeha Miantsena Isan'andro”, izay ilalaovany ny toeran'ilay mpilalao sarimihetsika Andy Lau ho jiolahy raindahiny be herim-po, Wah Dee, tamin'ilay toerana notazoniny tao amin'ilay tantara ny taona 1990.
Misy ekipa mpamokatra feno ao andamosiny, na eo amin'ny fakan-tsary na ivelany: Mocking Jer. Manampy an'i Ah Wah, misy an'i Ah Tin sy Ah Sau ankehitriny ny Mocking Jer, samy nahazo diplaoma tamin'ny Akademian'i Hong Kong amin'ny Fandalinana ny Kanto (HKAPA) izay roa, ary mpamorona ny Mocking Jer.
Tsy vokatra voalohany nataon'ny ekipa ny “Mandeha Miantsena Isan'andro”. Nampiasa lahatsary iray malaza ny lahatsarin-dry zareo voalohany, “Chan Ho Nam, ilay Mpampianatra”, mba hanebahana ireo mpitandro filaminana ao Hong Kong amin'ny fampiasana herisetra diso tafahoatra ataony.
Diakasary avy tamin'ny lahatsary tamin'ny YouTube “Chan Hoi Nam, ilay Mpampianatra”.
Niainga tamin'ny resadresaka nifanaovana nandritra ny hetsi-panoherana fiantsenàna tao Mong Kok ny hevitra hanao iny horonantsary fohy iny, hoy i Ah Tin nanazava :
Indray andro, nandeha niaraka tany Mong Kok izahay mba hiantsena. Niresaka momba ny zavatra nitranga tao anatin'ilay horonantsary “Tanora ary Mahery setra'” izahay, izay i Chan Ho Nam, mpilalao fototra [izay jiolahy raindahiny be herim-po] no milalao toeran'ilay mpampianatra ao aminà sekoly iray. Nitsiry tao aminay ny hoe afaka amboarinay ilay tantara ary ovaina ho mpitandro filaminana ilay mpisetrasetra Cha Ho Nam. Dia nanakarama olona izahay ary namokatra ny horonantsarinay voalohany.
Nandray anjara tamin'ny fanaovana ilay horonantsarinà mpampianatra ireo mpisera amin'ny Aterineto sy ireo mpianatry ny HKAPA. Nampahafantarin'i Ah Sau an'ny ekipa i Ah Wah, izay nahazo diploama tamin'ny APA, ary dia lasa iray amin'ireo mpilalao sarimihetsika i Ah Wah. Nanomboka itamin'izay dia naraka niasa izy telo, ary samy manana ny anjara asany ny tsirairay. Ah Tin no tompon'andraikitry ny fikarakaràna ny ivelan'ny sehatra. Ah Wah dia mpilalao, Ah Sau no misahana ny hafa rehetra anatiny sy ivelan'ny fanodinana sy fakàna an-tsary.
Mandika ny fihetsehampon'ireo vahoakan'i Hong Kong manoloana ny fampiasan-kery diso tafahoatra ataon'ny mpitandro filaminana ny “Mandeha Miantsena Isan'andro”, ary veivety dia lasa nalaza izy io, efa manana mpijery miisa 700.000 hatramin'izao. Raha ny marina, ilay rakikira an-tsary dia nalaina tamin'ilay lahatsary voalohany nanehoan'ireo mpisera amin'ny aterineto an'i Ah Wah nihira ilay fiverenana manintona amin'ilay hiran'ny Revolisiôna Fiantsenàna, nosoratan'ireo mpisera amin'ny aterineto avy ao amin'ny Hong Kong Golden Forum, ary namporisika azy hanohy hilalao azy manontolo. Tsy noeritreretin'izy ireo mihitsy ho lasa malaza be ilay rakikira tranainy. Lahatra no fahitàn'i Ah Wah azy io:
Satria efa tafiditra ao izahay, manantena izahay fa ho afaka hanohy hanao horonantsary, ary hampiasa hatsikana ankolaka mba hampisehoana ny zavatra mitranga amin'izao fotoanantsika izao.
Nanomboka namokatra ny lahatsariny fahatelo ny Mocking Jer, izay hifanandrina ihany koa amin'ny habibian'ny mpitandro filaminana. Mino i Ah Wah fa hanampy ireo olona hahatakatra bebe kokoa ny zavatra mitranga amin'ny fiarahamonina ny fampiasàna ny hatsikana.
Na dia mampihomehy sy mahatsikaiky aza ireo lahatsarin'ny Mocking Jer, mitsikera mazava tsara ny fahefan'ny mpitandro ny filaminana izy ireny, ary manaparitaka ny fotokevitra mandeha miantsena — endrika hetsi-panoherana iray izay “mandeha miantsena” ireo mpandray anjara, izay hitan'ny mpitandro ny filaminana ho “famoriam-bahoaka tsy ara-dalàna”. Nahatsapa faneriterena ara-pôlitika ve ny Mocking Jer? Nilaza i Ah Wah fa efa niomanany ny faneriterena ara-pôlitika, fa hanohy hitsapa ny vintany hatrany izy ireo, ary hanohy ny zavatra ataony. Niaiky izy fa somary nikorotan-tsaina ihany tamin'ny nilalaovany voalohany teny an-dalambe tao Mong Kok, nandritra ny fandraketana an-tsary, satria feno mpitandro filaminana sy fiaranà mpitandro filaminana nanodidina azy ireo. Nanipika izao i Ah Wah:
Tsy tia hanery ny mpijery na amin'inona na inona izahay. Te-hampiseho fotsiny ny zavatra mitranga amin'ny fiarahamoninay fotsiny izahay, ary hanampy ireo vahoakan'i Hong Kong hahatakatra ny zavatra mitranga. Tsaroako aho namaky lahatsoratra iray, izay namela fihetseham-po lalina tamiko. Izao no voalaza ao: Ireo olona miaina ao anaty tontolo mifanila no tena olona mahatahotra indrindra [tsy mitovy fijery amin'ny rehetra ny zavatra iainana marina amin'ny fiarahamonina].
Mikasika ny Hetsika Elo avokoa ireo lahatsary telon'ny Mocking Jer. Raha nanontaniana izy ireo hoe resaka pôlitika ihany ve no horonantsary ataony, nilaza i Ah Wah fa miainga avy amin'ny zavatra mitranga amin'ny fiarahamonina ao Hong Kong ireo hevitra amin'ireny horonantsary ireny:
Hatry ny 28 Septambra [fony nanaparitaka entona mandatsa-dranomaso tamin'ireo mpanao hetsika am-pilaminana ireo mpitandro filaminana] niova ny fiarahamonina manontolon'i Hong Kong. Misy hafatra pôlitika eny rehetra eny. Hitanao ny loko mavo eny an-dàlana rehetra eny. Raha tsy mikasika ilay resaka ianao, dia toy ny hita ho miala lavitra azy io. Raha hisy fifidianam-bahoaka marina eto Hong Kong, tsy misy tokony hiresahana ny momba an'io mihitsy!
Vahoaka maro no mahita fa manahirana ny misafidy amin'ny lafatra sy ny tena zava-misy marina. na dia izany aza anefa, na tianao na tsia, misy safidy tsy maintsy atao. Nmatsy tena ny ara-bola ireo horonantsariny ny Mocking Jer, ary nijanona ho mahaleo tena hatrany, na eo amin'ny lafiny olona miasa na ireo fitaovana hafa. Ankoatra ny famokarana horonantsary, mila mitady vola hiainana ihany koa izy ireo. Nihatoka i Ah Wah ary nitsiky:
Mila mitady vola hiainana ihany koa izahay. Tian'ireo mpijery hamokatra horonantsary fohy mahafinaritra izahay, saingy midika izany hoe misy vola lany amin'ny famokarana azy. Nataonay tamin'ireo vola am-paosinay ireo. Raha any aoriana, ho afaka hanatontosa horonantsary ho an'ireny mpanao dokambarotra ireny izahay, hampahafantarinay ny mpijery ihany. Manantena ihany koa izahay fa ho takatr'izy ireo izany. Na inona mitranga, hanome ny tsara indrindra avy aminay foana izahay amin'ny famokarana rehetra.